taageerayaasha Messi iyo kooxda Barcelona oo helaya war aad u wanaagsan kahor kulanka habeen dambe ee El Clásico – Gool FM
taageerayaasha Messi iyo kooxda Barcelona oo helaya war aad u wanaagsan kahor kulanka habeen dambe ee El Clásico
(Barcelona) 05 Feb 2019. Wargeysyada kasoo baxa Barcelona ayaa ka warbixiyay war aad u wanaagsan ee rajo galinaya taageerayaasha adduunka, kaasoo ku aadan in Messi uu awoodo ka qeyb qaadashada kulanka habeen dambe ee El Clásico.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxay habeen dambe ku wada ciyaari doonaan garoonka Cump Nou lugta koowaad wareega 4-ta ee tartankan Copa del Rey.
Hadaba wargeyska “Sport” ee gobolka Catalonia ayaa wuxuu maanta boggiisa hore cinwaan kaga soo dhigay “Messi wuxuu leeyahay haa kulanka El Clásico”.
Wargeyska ayaa wuxuu hadalkiisan ku cadeeyay in Messi uu ka qeyb galayo kulanka habeen dabe ee El Clásico in kasta uu jiro dhaawac, hadana waxaa la leeyahay wuu awoodaa inuu ciyaaro, waloow uu dhaawacan dartiis u seegay tababarkii guud shalay Isniinta ahaa ay sameysay kooxda reer Catalonia.
Dhinaca kale wargeyska “Mundo Deportivo” ayaa wuxuu soo wariyay inuu jiro war aad u wanaagsan ee ah ka qeyb qaadashada Messi kulanka ay habeen dambe Barca ku soo dhaweyn doonto garoonkeeda Cump Nou kooxda Los Blancos.
Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi ayaa ku dhaawacmay kulankii ugu dambeyay ee horyaalka Spain ay kula ciyaareen kooxda Valencia, taasoo ku dhamaatay barbaro 2-2.
Dhinaca kale wargeyska Isbaanishka ah ayaa sidoo kale soo wariyay inuu jiro war wanaagsan ee farxad galinaya taageerayaasha Lionel Messi, kaasoo ah in laacibka reer Argantina uusan qabin dhaawac dhanka muruqa ah, balse kaliya uu booday muruq.
Waxaa xusid mudan in sidoo kale Lionel Messi uusan ka qeyb galin tababarka guud ay shalay kooxda Barcelona ugu diyaar garoobeeysay kulanka adag habeen dambe ee El Clásico-da, taasoo dhalisay shaki xoogan ee ku aadan ka qeyb galka Lio ee kulankan.
Wakiilka Ivan Rakitic oo xaqiijiyey haddii laacibku ka tago horyaalka Spain xagaagan
Mourinho oo lagu xukumay sanad xabsi ah iyo ganaax lacageed kaddib markii lagu eedeeyay canshuur uu khiyaamay